China Car suspence Shock Damper Shock Absorber-Z11057 mpanamboatra sy mpamatsy | TANGRUI
Fiatoana fampiatoana fiara mampihemotra tampoka Shock Absorber-Z11057
Ny famolavolana fantsona kambana dia manana fantsona anatiny fantatra amin'ny anarana hoe fantsona faneriterena sy fantsona ivelany fantatra amin'ny anarana hoe fantsona fitehirizana. Ny fantsona ivelany dia fitehirizan-tsolika. Rehefa miakatra sy midina ilay tsorakazo dia atosika / sintonina amin'ny alàlan'ny valizy ifotony ary miditra / mivoaka ny fantsona fitehirizana. Ny valve amin'ny piston dia miasa fotsiny rehefa difotry ny diloilo. Ny fikorontanan'ny tangrui dia novolavolaina tamin'ny menaka ampy hamenoana ny fantsom-boaloboka, na inona na inona fitsangatsanganana na toerana misy azy. Ny menaka faneriterena feno menaka foana.
Fampiharana momba ny valizy manokana
Ireo injeniera mitaingina fiara mifidy kaody valva na soatoavina manalefaka hery ho an'ny fiara manokana hahatratrarana mizana mizana salama tsara sy fitoniana ao anatin'ny toe-javatra mitondra fiara. Ny fifidianan'izy ireo ny rà, ny kapila valizy mihodina, ny loharano ary ny orifices dia mifehy ny fikorianan'ny tsiranoka miaraka amin'ilay singa, izay mamaritra ny fahatsapana sy ny fikirakiran'ny fiara.
Ny mpitroka hatairana sasany dia namboarina tamin'ny alàlan'ny famolavolana aluminium maty-cast, mitaky peratra O-rubber mba hisorohana ny diloilo tsy hihoarana ny valizy. Ny famolavolana piston vy manaparitaka Tangrui dia mamela ny refy piston mazava kokoa, tsy mila singa fanampiny hanatsarana ny faharetana sy ny miavaka miavaka.
Lockout Hydraulika matanjaka
Mijanona ny hidina hidy ary ny ondana, ny fiakarana miakatra amin'ny fahatairana, izay manakana ny fanitarana ny fampiatoana, ny fivoahan'ny piston ary mihena ny fahasimban'ny fivorian'ny tombo-kase. Izany dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny harona rivotra tsy ho simba amin'ny toe-javatra tafahoatra.
Ireo mpitraka taitra Tangrui dia novolavolaina tamina kirihitr'ala. Ny soroka dia mitazona ny lozam-pifamoivoizana ary misoroka ny fivezivezena.
Niampana ny gazy-niota nitroka
Ny fikorontanana entin'ny gazy dia manampy ny azota amin'ny famolavolana lozisialy hidoraka hidradradradra hanatsarana ny fahombiazana ary hanomezana fiakarana mora kokoa sy malefaka kokoa. Ao anatin'ny fikorontanan'ny enta-mavesatra dia ampidirina ao anaty efitrano ambonin'ilay menaka hydraulic ny fihenan-tsindry ambany amin'ny gazy azota, manampy amin'ny fampihenana ny fahamendrehana, hampihena ny hovitrovitra, hanitatra ny androm-piainan'ny serivisy ary indrindra ny fanamafisana ny fihenan'ny tsiranoka hydraulic.
Ny famoahana gazy dia mampihena ny fihenan'ny aotiran'ny rano, izay miteraka hafanam-po. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny zava-bita ny aération. Ny fampidirana ny gazy azota amin'ny fahatairana, dia manindry ny tadin-drivotra amin'ny tsiranoka hydraulic ary manakana ny menaka sy ny rivotra tsy hifangaro mba hamorona sombin-javatra. Amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fiaramanidina, ny fikorontanana entin'ny gazy dia mahaliana kokoa ary mahomby kokoa amin'ny alàlan'ny fanomezana fanalefahana tsy miovaova.
Type Mpitroka manaitra
Brand Ho an'ny IX35
Certificate ISO16949 / IATF16949
Previous: New Model Car Shock Absorber-Z11055
Manaraka: Metallurgy Shock Absorber-Z11058 vita amin'ny vy vita amin'ny vy
Ambongadiny fiara fampiatoana faritra baolina mitambatra ...
Kitapo fanamboarana fampiatoana havanana avo lenta avo lenta ...
Ny valin'ny kodia kodiarana dia vidin'ny mahaliana ho an'ny Mazda-Z8044
Tangrui steering knuckle ankavia ho an'ny Hyundai-Z1660
Fiatoana mihantona aorinan'ny rivotra any ankavanana- Z11062
Shock Absorber fingotra, Hood Shock Absorber, Shock Absorber Bolt, Tyre Ball Joint, Knuckle familiana eo aloha, Hub misy kodiarana,